Somali / Macluumaad muhiim ah oo ku saabsan qorshaynta sannad dugsiyeedka soo socda
Qoysaska Sharafta leh ee Iskoolada Cherry Creek:
Waxaan rabnaa inaan idinla wadaagno macluumaad cusub oo ku saabsan qorshayaasha Dugsiga Hoose ee nidaamka fasalka dhexdiisa wax lagu dhiganayo ee sannadka dambe. Maadaama hagida iyo fariinta ka imaaneysa xaga dawlada oo ka jawaabaysa cilmi-baaris cusub iyo xaaladaha is-bedelaya, waxaan anagu diyaarsaneynaa qorshayaasheena.
Maanta waxaan sii deyneynaa qorshe waxbarasho oo aasaasi ah oo ay ku jiraan qaar ka mid ah qorshe loogu talagalay in 5 maalmood usbuucii waxbarashada fasalka dhexdiisa ah ay wax ku bartaan ardayda fasalada K-5 ah. Ahmiyadeenu waxay ahayd in meel wax lagu wada baro ardayda iyadoo istiraatiijiyada koowaad ay ahayd sdii loo xakameyn lahaa faafitaanka fayraska, iyadoo la ilaalinayo nidaamka kala-fogaanshaha bulshada sida ugu macquulsana loo fuliyo qorshaheena waxbarashada.
Macluumaad faahfaahsan oo dheeraad ah fadlan booqo websaydka Qorsheynta Tooska ah https://www.cherrycreekschools.org/PlanningForward.
Si aad ugu tarjumato websaydka Qorshaha mustaqbalka, adeegso oo xulo luqadaha liiska tarjumaada ee barta madow. Fadlan la xiriir (Omar Nur) cinwaanka (onur2@cherrycreekschools.org) si aad u heshid macluumaad ku qoran luqaddaada).
In kasta oo ay jiraan kala duwanaansho weyn oo u dhexeeya dhaqdhaqaaqa ardayda ee dugsiyada hoose marka la barbar dhigo dugsiyada sare, waxaan aaminsanahay in qaabkan uu sidoo kale noo ogolaan karo inaan qorsheyneyno nidaam waxbarasho oo loogu talagalay fasalada 6-12 taas oo keni karta in 5 maalmood usbuucii wax lagu baro ardayda fasalka dhexdiisa . Waxaan sii wadi doonaa inaan ka sii shaqeyno asbuucyada soo socda oo aan idiin soo gudbino waxi macluumaad cusub marka ay diyaar noqdaan.
Intaa waxaa sii dheer, waxaan sii wadi doonnaa inaan soo gudbino oo siino fursadaha waxbarasho ee khadka tooska ah ee internetka oo loogu talagalay ardayda oo dhan iyadoo loo sii marayo barnaamijka K-5 ee Dugsiyada Hoose iyo dugsiga dhexe iyo sare ee Elavation.
Waqtiga diiwaan gelinta iskooladeena yaa furmi doonta laga bilaabo bisha June 29keeda ilaa iyo July 13keeda si loo siiyo fursad iskoolada inay sameeyaan jadwalka bisha Luly. Waxaan sii wadi doonaa inaan u soo dirno xusuusin qoysaska illaa iyo waqtiga diiwaangalinta.
Fadlan booqo websaydka Qorsheynta mustaqbalka ee Cherry Creek bogga https://www.cherrycreekschools.org/PlanningForward si aad u aragtid wargalinta cusub ee qorshaha degmada ee loogu tala galay dugsiyada hoose ee deyrta-falka 2020, ama si aad u ogaato waxyaabaha ku saabsan warbixinta mustaqbalka.